Kupona Mars Ine Bhonasi Zvemukati Packs | Linux Vakapindwa muropa
Kupona Mars kune mabundles ane zvimwe zvemukati
Iko kupona uye simulation vhidhiyo mutambo wemakoloni paMars Surviving Mars yawana pasuru nyowani yenhau uye nezvimwe zvemukati kuti vashandisi vayo vagone kunakidzwa nazvo zvakanyanya. Nhau dzakanaka dzeiyi zano vhidhiyo mutambo kubva kuHaemimont Mitambo iyo inowanikwa kune akasiyana mapuratifomu, kusanganisira GNU / Linux futi. Iyo chaiyo package ine zita re Mahara Zvakavanzika Resupply Pack.
Yemahara yemukati mapakeji sezita zvarinoratidzira uye izvo zvichawedzera kugona kwemusoro wepakutanga. Nayo, Kupona Mars kunowana dzimwe nhau kubva kuruoko rwe Paradox Interactive izvo zvatinozotaura pane zvinotevera. Nenzira, iyi rongedza ndeye yazvino mune akateedzana emahara ekuwedzera-pane zvemukati kuti aburitsirwe zita remusoro, asi yakajairwa mhando yekuvandudza inogamuchirwa. Pakati zvimwe zvirimo yeiyi rongedza nyowani tinogona kuwana zvimwe zvinozivikanwa zvitsva:
San Telmo moto- Vagari vacho havazokwanise kurara zvakanaka husiku nekuda kwemwenje asinganzwisisike anotanga kuoneka uye havana chikonzero chekuve varipo. Kusazorora uye chakavanzika kuchaita kuti kugara kwevaya colonists paMars kuve kwechokwadi. Zvakare, izvi zvinogona kunge zvine chekuita neshanduko yemvura ...
Dombo reMuzivi: inosangana nezvinhu zvisingazivikanwe izvo hazvizivikanwe kana varipo kuti vabatsire kana nemamwe mabasa.
Metatron- Maonero akavandudzwa eiyo dome kubva mudzimba aine zvimwe zvakavanzika uye zvakavanzika.
Kana iwe uchiri usina mutambo wevhidhiyo uye uchida kuunakidzwa, unogona kuuwana mune yakakurumbira Valve Steam chitoro, uye zvakare mune inozvininipisa Chitoro uye GOG. Rangarira kuti mutambo unodhura mashoma 39,99 € asi zvirimo rongedza mahara zvachose… saka haufanire kushandisa imwe mari kuti uwane nhau.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Kupona Mars kune mabundles ane zvimwe zvemukati
kuvhuraSUSE Leap 15 Linux ikozvino yawanikwa yeRaspberry Pi uye mamwe maArm majaira
Kwayedza Pilot, isingazivikanwe asi inobatsira Mozilla Firefox chishandiso